Ny fizahan-tany any Azia dia miomana amin'ny famerenana amin'ny laoniny
Home » Lahatsoratra farany farany » fanorenana » Ny fizahan-tany any Azia dia miomana amin'ny famerenana amin'ny laoniny
Airlines • Airport • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao lafo vidy • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ahoana no fomba hanombohana amin'ny fomba mahomby ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany, ny indostria izay mampiasa mpiasa 1-in-10 manerantany? Mpiasa iray nopotehin'ny Covid-19 areti-mifindra.
Araka ny World Travel & Tourism Council (WTCC) ny fiatraikany mivantana sy mivantana sy ankolaka tamin'ny fitsangatsanganana tamin'ny taon-dasa tamin'ny taona 2019 izay:
🔺Vola mitentina 8.9 tapitrisa dolara amerikana amin'ny harinkarena faobe manerantany
🔺10.3% amin'ny GDP eran-tany
🔺Asa 330 tapitrisa, asa 1 amin'ny 10 manerana an'izao tontolo izao
🔺1.7 tapitrisa dolara amerikana fanondranana mpitsidika (6.8% amin'ny totalin'ny fanondranana, 28.3% amin'ny fanondranana serivisy manerantany)
🔺Fampiasam-bola mitentina US $ 948 miliara (4.3% amin'ny fampiasam-bola tanteraka)
Ny habetsaky ny webinarà mipoitra miaraka amin'ny fanarenana sy ny adihevitra 'dingana manaraka' dia porofon'ny hery sy fahalianana hiverina hiasa.
Fa mahasoa ve ny webinar? Tamin'ny voalohandohan'ity herinandro ity, ny mpanonta hajaina Don Ross dia nanolo-kevitra fa matetika ny webinars dia latsaka amin'ny fahaiza-misaina tsara. “Koa satria ny areti-mandringana Covid-19 dia nandroaka anay rehetra hody tany an-tranony hiaina ambany hidin-trano, tototry ny fampiroboroboana ireo tranonkala web izahay izay mampanantena ny hamindra ny indostrian'ny fizahantany miverina avy eo amoron'ny lalana mankany amin'ny fenitra vaovao. Mampanantena ny hanoro antsika ny làlana mialoha ny safo-drano webinars, saingy matetika rehefa mirona amin'ny talkfests izahay dia manisy fatra ny antsipiriany. Izy ireo dia misoroka ny mazava loatra ary mifantoka amin'ilay tsy manjavozavo, miahiahy aho fa manatrika tranonkala web manantena izahay fa manantena ireo manam-pahaizana fa afaka manome saina mahazatra taloha mba hanampiana antsika hiaina ilay tafiotra ara-bola, ”hoy izy nanoratra.
Tsy handeha afa-tsy mandeha indray ny olona raha mahatsapa izy ireo fa azo antoka ny fanaovana izany - izany no nambaran'i Don Ross tsara indrindra rehefa nanoratra izy,
“Ao amin'ny tontolon'ny Covid-19, ny fahaiza-mandanjalanja dia milaza fa handeha isika rehefa azo antoka izany ary rehefa manana ny vola fanampiny isika. Izay no tsy itenenanay amin'ny webinar. Manaparitaka ny banky ny areti-mandringana ho an'ny rehetra, fa ahoana kosa no hiantohana ny fiarovana antsika ara-pahasalamana hahafahana mamerina ny dia indray? ”
Azia inoany fa hitondra ny fiakarana faratampony lehibe indrindra amin'ny dia any amin'ny faritr'i Pasifika amin'ny 2021, araka ny vinavinam-baovao navoakan'ny PATA. Nilaza ny fikarohana nataon'izy ireo fa ny mpitsidika dia tokony hanatitra mpitsidika 610 tapitrisa amin'ny 2021 (338m eo ho eo isam-paritra). Ny fitomboan'ny totalin'ny fahatongavan'ny mpitsidika 4.3% raha oharina amin'ny 2019 (585m).
Ny filohan'ny Birao fizahan-tany any Hong Kong, Pang Yiu-kai, dia nanamarika fa na dia sarotra aza ny maminavina ny fotoana hitrangan'ny indostria amin'ny areti-mifindra Covid-19, ny fihemorana miendrika V dia tsy azo atao manoloana ny fameperana any ampitan-dranomasina sy ny fampiatoana ny sidina.
Ny azony antoka dia nilaza fa ny tsena rehetra dia handany vola an-jatony tapitrisa, na an'arivony tapitrisa mihitsy aza, hanenjehana ireo mpizahatany satria nanaparitaka ny dia eran'izao tontolo izao ny areti-mandringana ka nandripaka ny indostria nanomboka ny volana feb.
“Tamin'ny 2003, ny valan'aretina SARS dia tany Hong Kong indrindra. Ho an'ny Covid-19, voakasik'izao tontolo izao, ”hoy i Pang.
"Japoney, Koreana ary Taiwanese, rezionaly, tanora ary antonony no tena maniry mafy ny handeha, nefa aleony lavitra mandritra ny fotoana lavitra noho ny teritery sy ny fialantsasatra amin'ny fialan-tsasatra," hoy izy.
Elaela vao ho sitrana ny dia lavitra ary mety tsy hiverina intsony ny sehatra any Hong Kong raha tsy amin'ny telovolana farany amin'ity taona ity, hoy ihany izy.